Ururka Ubax Faudation oo gargaar Raashin ah u Qeybiyay Qoysas Curyaamiin & Indhoolayaal ah. – Balcad.com Teyteyleey
Ururka Ubax Faudation oo gargaar Raashin ah u Qeybiyay Qoysas Curyaamiin & Indhoolayaal ah.
Ururka Samafalka iyo Gargaarka ee Ubax Faudation ayaa waxaa uu magaaladda Muqdisho ka qeeybiyay Raashin gargaar ah kaas oo uu ururku Gaarsiiayay Qoysas badaan oo iskugu jiray Curyaamiin,Indhoolayaal iyo kuwo lixaadkoodu uu kala dhantaalan yahay kuwaasi oo ku nool Degmooyinka Gobolka Banaadir Qaarkood.
Raashinkaan oo ahaa mid Gargaar ah ayaa waxaa uu ahaa mid iskugu jiray Qeybaha kalka duwan ee raashinka Fudud, waxaana kuu ka koobnaa Sonkar, Saliid, Timir, Caano iyo ,baasto, kuwaasi oo uu ururku ugu talagalay in uu ku afunriyo Bisha Barakeydsaan ee barakadda iyo kheryka badan oo Ramadaanka.
Ururka ubax foudsation oo Fadhigiisu yahay magaaladda labaad ee dalka Sweden ayaa waxaa ku bahoobay Gabdho Soomaaliyeed ee halkaasi ku ah jaaliyadda Soomaaliyeed iyadoo ururkuna uu yahay mid loogu talagalay in loogu adeego bulshadda Soomaaliyeed ee ay saameeyeen Abaaraha aiyo dagaaladda iyo weliba jiilaalka dabadheeraaday ee haatan ka jira Goboladda dalaka sooamaaliya Qaarkod ama guud ahaanba.
Raashinkaan gargaarka ee uu ubax Faudation uu gaarsiiyay Qoysaskaan aad iyo ad u tabaaleysan ayaa waxaa ay ahaayeen lkuwo ay noolosha ku adag tahay had iyo jeerna u baahan kaalmo biniaadnimo madama ay yihiin dad naafo ah oo aanan awloldin in ay xoogoodda isticmaaalaan Xoogoodda.
Raashinkaan Gargaarka ah ee Qoysaskaan la gaarsiiyay ayaa waxaa kaalin mug leh ka qaatay hergelintiisa wakiilka ururkaasi Uaxab ee magaalada Muqdiosho iyadoo loogu soo hagaajiyay lacag dhan US 500 00 taas oo loogu iibiyay Raashin kala duwan loona Gaarsiiyay qaabkii loogu talagalay, iyadoo Qoyskasta uu helay Shan Qeeyb oo raashinkaasi ka mid ah, sida Sonkor, saliid, Timir,caano iyo Baasto.
Qoysaskaan ayaa markii la soo gabagabeeyay raashinkaasi qeeybintiisa ay si weeyn uga mahadceliyeen ugana mahadceliyeen ururka samafaalka iyo gargaarka ee ubax faudation kaalinta mugga leh ee uu ka qaato had iyo jeer u gargaaridda bulshadda soomaliyeed waxayna codsi u jeediyeen ururadda kalae ee iyagu ku halanarimaha nuucaan ah balse aanan weli wax soo gaarsiinin iyagoo codsaday in lala soo gaaro gargaar deg deg ah oo ay sheegeen in ay siweeyn baahi ugu qabaan.
The post Ururka Ubax Faudation oo gargaar Raashin ah u Qeybiyay Qoysas Curyaamiin & Indhoolayaal ah. appeared first on Ilwareed Online.
Faahfaahin diyaaradii kusoo dhacday Garoonka Aadan Cadde + Sawirro
AMISOM oo isku diyaarineysa howlgal ka dhan ah Al-shabaab